बसको छतमा चढेर सुरक्षाकर्मी र... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
बसको छतमा चढेर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी मतदान केन्द्र प्रस्थान
नारायण खड्का दाङ, मंसिर, १८
दाङमा निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सामाग्रिसहित सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरु सोमवार मतदान केन्द्र प्रस्थान गरेका छन्।
मतदान अधिकृत सहितका कर्मचारीहरु मतपत्र र निर्वाचनका अन्य ६४ प्रकारका सामाग्रिहरु सहित चुनाव गराउन सम्वन्धित मतदात केन्द्रमा प्रस्थान गरेको दाङका सहायक निर्वाचन अधिकृत भुपाल भण्डारीले जानकारी दिए।
अति सम्बेदनशिल क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा प्रहरी नायब निरीक्षक र सम्बेदनशिल तथा सामान्य मतदान केन्द्रमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा प्रहरी खटेको उनले बताए।
सार्वजनिक बसहरु भाडामा लिएर मतदान सामाग्री लगेर सोमवार सबै सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरु निर्वाचन गराउन आ–आफ्नो मतदान केन्द्रका लागि प्रस्थान गरेको भण्डारीले बताए। बसको छतमा हतियार सहितका प्रहरीहरुलाई राखेर मतदान अधिकृतहरु सम्बन्धित केन्द्र तर्फ प्रस्थान गरेका छन्।
बबई गाउँपालिका र देउखुरीको राजपुर, राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका अति सम्वेदनसिल मतदान केन्द्रमा यसअघि नै निर्वाचन सामाग्री पुगिसकेको भण्डारीले जानकारी दिए । सोमवार बेलुकासम्म सबै मतदान केन्द्रहरुमा निर्वाचन गराउन आवश्यक सामाग्री, सबै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुगि सक्ने भण्डारीले बताए ।
दाङमा ३ हजार १ सय ५२ जना कर्मचारी र ४ हजार १ सय बढी सुरक्षाकर्मीहरु निर्वाचनका गराउनका लागि परिचालन गरिएको छ।
तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङमा कूल ३ लाख ३८ हजार ९ सय ५३ जना मतदाता रहेका छन्। १ लाख ११ हजार ९६ जना मतदाता रहेको क्षेत्र नं. १ मा ५० मतदान स्थलमा १ सय २९ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । १ लाख ८ हजार ८ सय ७० जना मतदाता रहेको क्षेत्र नं. २ मा ४८ मतदान स्थल र १ सय २८ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै १ लाख १८ हजार ९ सय ८७ मतदाता रहेको ३ नं. क्षेत्रमा ५३ मतदान स्थल र १ सय ३७ मतदान केन्द्र रहेका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तगत यही मंसिर २१ गते हुन प्रतिनिधीसभा र प्रदेससभा निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १८, २०७४, ०३:१८:५४